Abbaan seeraa Ameerikaa Fandii maallaqa Tiraamp dallaa daangaa Meeksikootti ijaarsisuuf karoorsan daangessan - BBC News Afaan Oromoo
Abbaan seeraa Ameerikaa Fandii maallaqa Tiraamp dallaa daangaa Meeksikootti ijaarsisuuf karoorsan daangessan
25 Caamsa 2019
Goodayyaa suuraa Dallaa daangaarratti ijaaruun waadaa pirezedanti Tiraamp wayita duula filannoo bara 2016 seenan
Abbaan seeraa Federaalaa Ameerikaa yeroof maallaqa fandii ijaarsaa dallaa daangaa Meeksikoo fi US gidduutti ijaarsisuuf oolu akka damee humna ittisaarraa hin fudhanne daangessee.
Kongereesiin biyyatti sababii hin mirkaneessineef doolaara biliyoona tokko Arizonaa fi Teeksaasittti akka itti hin fayyadamne daangeesse.
Pirezedantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp jalqaba bara kanaatti labsii yeroo muddamaa labsuun nageenya biyattiif jecha dallaa ijaaruuf doolaarri Biliyoona 6.7 akka barbaachisu himanii turan.
Bulchiinsa 20 keessatti Yuuniyeenii walabummaa mirga Siilivilii Ameerikaa waliin ta'uun Pirezedantichi labsii yeroo muddammaa akka hin labsine seeraan himachuuf yaalaa jiru.
Tiraamp Ispeeniin 'dallaa Sahaaraa ijaari' jedhan
Abbaan seeraa Haywood Giliyaam anga'oonni aangoo isaanii darbuun miidhaa deebisanii suphuun hin danda'amne qaqqabsisuuf akka jira akeekkachisan.
Biyyoota lamaan gidduutti ijaarsi dallaa kun yeroo torban tokkoo hin caallee keessatti eegaluuf jira. Ammas taanaan fandii maallaqaa ijaarsa kanaaf barbaachisu iddoo birataii Tiraamp argachuu akka danda'an CNN gabaaseera.
Dhimmi ijaarsa dallaa siyaaasa Pirezedantichi hordofan qorumsa jabduu keessa galche.
Ji'a Guraandhalaa darbe Kongireessiin biyyatti ijaarsa dallaa kanaa doolara Biliyoona 1.3 Kutaa bulchiinsa Teeksaasitti ijaaramuuf raggaasise. maallaqni kun garuu kan Pirezedant Tiraamp babaadanii gadi.
labsii yeroo muddaama labsuun Doolara biliyoonatti lakkaa'amu ijaarsa dallaa kanaaf oolu argachuuf ture. Dippartimeentii humna ittisa biyyaarraa doolara Biliyoona 2.5 fi doolara Biliyoona 3.6 ijaarsa pirojeektii humna waraanaarraa argachuuf ture.
Maallaqni doolaarii Biliyoonni 23 ammas dallaa 3200 km daangaarratti ijaaruuf gahaa miti.
Manni maree bakka bu'oota uummataa biyyatti fandiin maallaqni dallaa kanaaf ramadame hojii biraaf akka hin oolee karaa seeraan daangeessa.
Godaantota Kaaravaan: daangaa US-Meeksikootti loltootni 'waraana hin hidhatan'
Waashingitan bulchiinsa US jaqabaa reeffa namaa kompostii gochuu eeyyamte taate
Tiraamp Ispeen 'dallaa Sahaaraa akka ijaartu' yaada dhiyeessan